China Batch Type Waste Tire Pyrolysis Miti fekitori uye vagadziri | LYBH
1. Vhura zvakakwana musuwo: inokasira uye inomhanya kurodha, inotonhora kutonhora, iri nyore uye inokurumidza waya kunze.
2.Kutonhodza kwakazara kweye condenser, yakakwira mafuta kuburitsa mwero, wakanaka mafuta mhando, hwakareba hupenyu hwebasa uye nyore kuchenesa.
3. Yekutanga yemvura modhi desulfurization uye kubvisa guruva: Inogona zvinobudirira kubvisa asidhi gasi uye guruva, uye kusangana akakodzera nyika zviyero.
4. Kubvisa kubviswa pakati pegedhi remoto: isina mweya, otomatiki deslgging, yakachena uye isina guruva, yekuchengetedza nguva.
5. Kudzivirirwa: otomatiki akanyudzwa arc yekutengesa tekinoroji, ultrasonic isiri-inoparadza kuyedza, manyore uye otomatiki ekuchengetedza michina.
6. Pedza gasi kupora system: yakatsva zvizere mushure mekupora, kuchengetedza mafuta uye kudzivirira kusvibiswa.
7. Direct kudziyisa: Iyo yakasarudzika maitiro inowedzera iyo yekudziya nzvimbo yeiyo reactor, iyo tembiricha inomuka nekukurumidza, uye tembiricha iri nyore kudzora, zvinobudirira kuwedzera hupenyu hwebasa reiyo michina.
8. Yakasarudzika yekupisa yekuisa ganda gadzira: yakanakisa yekupisa yekupisa maitiro, yakanaka simba yekuchengetedza mhedzisiro.
Iyo vhiri roseinoendeswa kune iyo pyrolysis reactor kuburikidza neyekuregedza module, iyo muvharo inongoerekana yakiyiwa nekuvharirwa, uyezve iro rese vhiri rinobviswa pyrolyzed; mushure mekurapwa kwepyrolysis, hutsi hwemafuta hwadonhedzwa, uye mafuta negasi zvinopfuura nepakati pechiedza uye chinorema mafuta uye gasi rekuparadzanisa mudziyo. Oiri negasi zvinopinda muchimiro chekupidigisa, chikamu chinodonhedzwa chakapindirwa mumafuta ematai, uye chikamu chisingadhurike chinowisa kune iyo yekudziya sisitimu yemoto kuburikidza neiyo gesi yekuchenesa system. Mushure mekugadziriswa kwemafuta uye gasi pyrolysis, yakasara kabhoni nhema uye simbi waya inozoregedzwa kuburikidza neyakavharwa yakazara otomatiki slag kubuda system.
1. Iyo pyrolysis reactor inotora chimiro chekupisa muviri wekuchengetera zvizere marara kupisa, ayo asingakwanise chete kuwedzera hupenyu hwebasa hweiyo huru moto, asi zvakare chengetedza peturu.
2. Yakakosha-yepamusoro tembiricha humbowo yakatenderwa hari inoshandiswa kune iyo reactor.
3. Iyo michina yakagadzirirwa infrared ichivharira yambiro uye yekucheka mudziyo, iyo inogona kuona izvo zvinoitika zvekuvharika kwepombi muitiro wekugadzira uye nekugadzirisa zvoga dambudziko rekuvharika, kuitira kuve nechokwadi chekuti hapazove nedambudziko rekuchengetedza nekuda kwepombi yekuvhara maitiro ekugadzira.
4. Dhiviri kutenderera dhizaini inogamuchirwa mune ye deslagging system, iyo inodzora iyo deslagging nguva mune angangoita maawa 2. Iyo slag inokurumidza kucheneswa.
5. Tora nzira yekutsvaira gasi yekuchenesa gadziriro yekuita gasi rinoburitswa mushure mekuchenesa rinosangana nematanho emunyika ekubuda.
6. Mushure mekushomeka kwemvura, sarufa kubviswa uye kusachena kubviswa mune yekuchenesa system, iyo yakawandisa gasi inopisa inomanikidzwa neakasarudzika gasi compressor uye inochengetwa mutangi yekuchengetera gasi. Inogona kushandiswa kupisa gare gare, kana kupihwa kune magasi-anopfura majenareta ekushandisa kana kutengesa.
7. Wedzera convection vents uye nekukurumidza kutonhodza zvishandiso kune chikuru chiravira, kuitira kuti tembiricha yeiyo huru turu inogona kudzikiswa kusvika pazasi pe100 degrees mumaawa maviri.
Batch Type pyrolysis chirimwa
Pasi nzvimbo (tangi)
* Inogona kutengeswa zvakananga.
* Unogona kushandisa zvigadzirwa zvemidziyo yekuwana peturu nedhiziri.
* Inogona kushandiswa sehuni.
* Carbon nhema yekuchenesa michina inogona kushandiswa kugadzira yakanaka kabhoni nhema.
* Carbon nhema nhema granulation michina inogona kushandiswa kugadzira zvidimbu.
* Hydraulic baling muchina unogona kushandiswa kugadzira matombo esimbi ekufambisa nekuchengetedza.
* Inogona kushandiswa sehuni nemoto.
* Yakawandisa marara gasi inogona kuchengetwa kuburikidza neyekuchengetedza system.
3. Mafuta anowanikwa ekugadzirisa pyrolysis
Oiri (mafuta emafuta, oiri yemafuta, mafuta anorema nezvimwe ..)
Carbon nhema pellet
d. Yakagadzirwa neanti-kuputika chishandiso, mavharuvhu ekuchengetedza, mavharuvhu ekukurumidzira, kumanikidza uye tembiricha metres, pamwe neyakavhundutsa system.
Pashure: Inoenderera Tsvina Tire Pyrolysis Miti
Zvadaro: Fekitori Mutengo China Chidimbu Tire Waste Rubber Kudzokororazve Inoenderera Pyrolysis Miti 50tpd
Batch Pyrolysis Chirimwa
Inoenderera Pyrolysis Miti
Crumb Rubber Kupwanya Zvishandiso
Zvakatipoteredza Shamwari Pyrolysis Miti
Zvakatipoteredza Shamwari Pyrolysis Chirimwa cheRubber
Yakazara Inoenderera Pyrolysis Miti
Rabha Powder Mukudhinda Line
Tire Kudzokorodza Pyrolysis
Tire Kucheka Muchina
Tire Mulch Dzokororazve Palnt
Tire Kudzokorodza Palnt
Yakashandiswa Tire Recycling Machine
Waste Tire Kudzokorora Muchina
Waste Tire Kudzokorodza Pyrolysis
Product Detail: Pretreatment system (yakapihwa nemutengi) Mushure mekurasa mapurasitiki, akaomeswa, akapwanywa, uye mamwe maitiro, vanogona kuwana saizi yakakodzera. Kudyisa sisitimu Iyo yepamberi yemarara mapurasitiki inoendeswa kune yekushandura bin. Inoenderera pyrolysis system Iyo marara mapurasitiki anoramba achiiswa mukati meiyo pyrolysis reactor kuburikidza neye feeder ye pyrolysis. Kuchenesa sisitimu Iyo yekudziya mudziyo mafuta inonyanya kushandisa isinga-gundurike gasi rinotsva rinogadzirwa ne pyrolysis yeaka ...
Batch Pyrolysis Chirimwa, Dongo Mapurasitiki Refinery, Plastiki Recycling Machine, Inoenderera Pyrolysis Miti, Tire Pyrolysis, Waste Tire Kudzokorora Muchina,